EzeZimbabwe, 10 Nhlangula 2019
Ibandla leZanu PF Lisuse uRugeje Esikhundleni Lafaka uMatemadanda
Ibandla leZanu PF ngoMvulo lisuse uMnu Engelbert Rugeje esikhundleni sokuba ngumqoqi wenhlelo zalo, uCommissar, lafaka uMnu Victor Matemadanda.
Itshonile Indodakazi kaTsvangirai uVimbayi, Yena Obelilunga Ledale Lephalamende
Umeli weGlen View South edale lephalamende uNkosikazi Vimbayi Tsvangirai-Java, yena obelilunga leMDC njalo eyindodakazi kamuyi uMnu Morgan Tsvangirai kasekho.
Imali Ilokhu Isilela Elizweni Njalo Itholakala kuBlack Market
Lokhu kwenzakala umongameli Emmerson Mnangagwaesithi ilizwe lizathola imali entsha.
Ingcwethi zeMpilakahle Zithi i-Hernia Kayelapheki Ngemithi Yesintu
Isimo sezempilakahle sokungahlangani kuhle kwenyama zangaphakathi eseHernia, sivame ukuthi abanye abantwana bazalwa belaso kodwa bathi lapho sebefikisa iminyaka emihlanu umzimba uzilungise wodwa.
UNkosikazi Nyampinga loNkosazana Dewa Bavunyelwa Ukuhlawula Isibambiso seBail
Umthethwandaba waphezulu owe High Court usunqume ukuba ababili abalwela amalungelo oluntu bakhululwe ngemva kokuhlawula inkulungwane eyodwa yamadola amaRTGS-$RTGS1,000.
Abantu Bakhuthazwa Ukuthi Balondoloze Amaxhaphozi
“ … Masingakhuthazi ukuhlaliswa kwabantu endaweni ezingamaxhaphozi ngoba lokhu sekubangele ukutshabalala kwemifula yethu, isimo esihle sokutholakala kulezondawo njalo kuphazamisa lenyamazana zendle."